WARBIXIN: Neymar Oo Ku Biiray Xiddigaha Saaxiibka La Noqday Dhaawacyada Kadib Dhaawacii Ugu Dambeeyay – Kooxda.com
HomeLigue 1WARBIXIN: Neymar Oo Ku Biiray Xiddigaha Saaxiibka La Noqday Dhaawacyada Kadib Dhaawacii Ugu Dambeeyay
WARBIXIN: Neymar Oo Ku Biiray Xiddigaha Saaxiibka La Noqday Dhaawacyada Kadib Dhaawacii Ugu Dambeeyay
October 14, 2019 Abdiwali Adan Jamac Ligue 1, Wararka Maanta, Warbixino 0
Fasaxa xulalka ayaa keentay in uu Neymar soo gaadho dhaawaciisii 3-aad ee sanadka 2019 isaga oo ku biiray xiddigaha dhaawacyadu dhibeen xirfadooda ciyaareed.
Xiddiga reer Argentine ayay dhibeen dhaawacyo sanadka 2019 isaga oo ku dhibaatooday in uu kooxdiisa PSG u ciyaaro kulamo sabab la xidhiidha dhaawacyo soo gaadhay.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa xiddigihii ka horeeyay Neymar ee ay dhaawacyadu dhibaato ku noqdeen.
Xiddiga ay isku dalka yihiin ayaa si fiican u garanaya ciqaabta dhaawacyada isaga oo dhaawaciisii ugu horeeyay ahaa mid jilibka ah kaas oo soo gaadhay November 1999 waxana uu garoomada ku soo laabtay April 2000 isaga oo hadana soo gaadhay dhaawac kale oo xun kadib 7 daqiiqo oo uu ciyaaray.
Dhaawacaas ayaa garoomada u diiday 18 bilood waxana uu wixii intaas ka dambeeyay nasiib xumo u noqday dhaawacyo xidhiidh ah intii uu ciyaarayay kubada cagta.
Xiddiga reer Holland ayaa soo qaatay xirfad cajiib ah ka hor intii uuna ciyaaraha ka fadhiisan dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore kadib markii ay xilli ciyaareedkiisi ugu dambeeyay hadheeyeen dhaawacyo xiddiga ayaa guud ahaan 1,200 maalmood ku qaatay qolka Daawaanta isaga oo ay daba dhigteen dhaawaco badan.
Dhaawac kuraanta ah ayaa ahaa dhibaatadii ugu weynayd ee Marco Van Basten inkasta oo uu maray qaliino aad u badan si uu uga boxo dhibaatadaas iyada oo uu ka mid yahay qaliinkii ka caawiyay in uu ciyaaro finalkii 1993 champions League.
Xiddiga ayaa wakhtigii Tottenham dhibaato ku qabay dhaawaca laakiin tan ilaa markii uu ku biiray Real Madrid dhaawaciisa ayaa sii batay isaga oo 17 dhaawac soo gaadhay tan ilaa 2013 markii uu ku biiray Los Blancos.
Xiddiga reer Germany ayaa labadii koob ee World cup 2014 iyo waliba Euro 2016 ku seegay dhaawac isaga oo garoomada ka maqnaa 220 maalmood kadib dhaawac jilibka ah oo soo gaadhay.
Xiddiga reer Colombia ayaa markii ugu horaysay ee uu dhaawac halis ah soo gaadhay u ciyaarayay kooxda River Plate waxana uu intaas wixii ka dambeeyay saaxiib la noqday dhaawacyo jilibka iyo cidhibta ah markii uu joogay kooxaha Porto, Atletico Madrid, Man United, Chelsea iyo Monaco.
Xiddiga reer Brazil ayaa markii ugu horaysay ee uu dhaawac halis ah soo gaadho ahayd xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee PSG kaas oo uu soo gaadhay jabniin faraha lugaha ah.
Taas ayaa keentay in uu dirqi taam ugu noqdo koobkii adduunka ee 2018.
Laakiin hadana waxa soo gaadhay dhaawac kale oo keentay in uu seego koobkii Coppa America ee snaadkii hore.
Tababaraha Xulak Qaranka Argentina Oo Ka Nixiyay Taageerayaasha Man City & Aguero Oo Sabab U Ah
Wargayska AS Oo Soo Xushay Shaxda Ugu Fiican Ee Xiddigaha 30 Jirka & Wax Ka Weyn Ah, Messi & Ronaldo Ayaa Hogaaminaya.